HIM | Health in Myanmar » 2014 » January
OMG it’s Rihanna! You too, can “save lives one lipstick atatime”. Slactivism has never been so much fun! Jamie ++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++ The M∙A∙C AIDS Fund, Rihanna and UNAIDS team up to reach nearly2million young people in need of lifesaving HIV treatment UNAIDS 30 January 2014 Star studded effort to support the […]
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, ကျန်းမာရေး အသိ, လမင်းကို
ဆံပင်ညှပ်လို့ ကတ်ကြေးထိပြီး HIV ပိုး ကူးနိုင်ချေ အလွန်နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆံပင်ညှပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ သွေးပေရင် အချိန်တို အတွင်းခြောက်သွားပါတယ်။ သွေးခြောက်တာနဲ့ သွေးထဲက HIV ပိုးက သေသွားပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ ဆံပင်ညှပ်သူတွေကလည်း HIV ကာကွယ်ရေး အသိအမြင်တွေ တိုးလာပြီလေ၊ တစ်ခါသုံး ဓားတွေ သုံးလာတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း သွေးမထွက်အောင်၊ ဓားတွေ ကတ်ကြေးတွေ မရှအောင် သတိထားကြ ပါတယ်။
PLHIV များ၏ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို စက်ဘီးစီးမြှင့်တင်နေသူ လားရှိုးရောက်ရှိ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, အခွင့်အရေး, ဆေးဝါး, မြစ်မခ
မြန်မာနိုင်ငံမှ PLHIV (People living with HIV) အိတ်ရ်ှအိုင်ဗွီ ကူးစက်ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများ၏ စိတ်ဓါတ် ခွန်အားကို မြှင့်တင် လို၍ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းသို့ စက်ဘီးစီးနင်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တစ်ကိုယ်တော် စက်ဘီးစီးနင်းသူ H.I.Vရောဂါသည် ကိုစရကိုမှ ဇန်န၀ါရီလ (၂၈) ရက်နေ့က လားရှိုးမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် ပြောကြားလိုက်သည်။
A long and solid article on health and the World Bank and Myanmar in the Irrawaddy. The beatification of Jim Kim gives meabad feeling in my stomach. Earlier this week he said: “The Thai people haveadeep commitment to economic justice.” https://tinyurl.com/ml4johy Was he talking about another country called Thailand? And Universal […]
AIDS နှင့် ကမ္ဘာ (၅)
Author: HimBur | Category: Myanmar, လူတိုင်းအတွက်no comments | Tags: AIDS, ကလေး, ပညာပေး, ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်
သွေးနဲ့ သွေးပစ္စည်းသွင်းမှုကြောင့် AIDS ရောဂါ ရလာသူဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတဲ့ အဖြေမှန်ကိုတော့ ၁၉၉၂-၁၉၉၅ လောက်မှ သိရမယ်။ ဒါတောင် မှတ်တမ်းတွေ ကောင်းကောင်းထားနိုင်မှ သိမှာ၊ ပြဿနာကတော့ မသေးတာ အမှန်ပါပဲ။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ CDC (စီဒီစီ) ကနေ AIDS ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး ထိုးသူတွေမှာ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးနောက် ဒီကူးစက်နည်းဟာ AIDS ပြန့်ပွားရေးမှာ အခရာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို တစ်နေ့တခြား ပိုပြီး ထင်ရှားလာပါတယ်။
What is going on? Jason Eligh of UNODC, in his personal capacity, has tweeted lately about funding for harm reduction in Myanmar. Can any reader put the following tweets into context? Has methadone been dropped from cases for investment? Is methadone on the back burner? What is going on? Jamie ++++++++++++++++++ Jason Eligh ‏@JasonEligh #HIV […]
Author: HimBur | Category: HIM, ဆောင်းပါး1 comment | Tags: ပညာပေး, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆေးအရည် ပုလင်းငယ်လေးတွေပါ။ ၁၅-၂ဝ (စီစီ) သာပါလို့ ထိုးဆေးပုလင်း အတိုင်းပါဘဲ။ မိန်းကလေး တယောက်ကို ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ဘို့ရာ (သားကာင်းကို ကျော့ကွင်းထောင်ဘို့ရာ) ဆေး ၁ဝ-၁၅ စက်သာလိုပါတယ်။ “ညီမလေး အအေးလေး သုံးဆောင်ပါအုံး” ဆိုပြီး တစိမ်းယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် သမီးရည်းစားကဖြစ်ဖြစ် သဘောကောင်းချင်ယောင်နဲ့ တိုက်လာရင် သတိထားပါလေ။ ငါးမျှားချိတ်ကိုမမြင်ကြဘဲ စားစရာသာမြင်လို့သာ ငါးတွေဟာ တငါသည်ဖမ်းတာ ခံကြရတာပါ။
Nothing about the needs of women
Nothing in this piece about the needs of women who use postcoital contraception. Just the ‘concerns’ of professionals who appear not to have read much of the evidence about it. Sounds like moral panic to me. Jamie ++++++++++++++++++ Doctors warn of rising ‘morning-after pill’ use, abuse in Burma Kyaw Hsu Mon The Irrawaddy 23 Jnauary […]
AIDS နှင့် ကမ္ဘာ (၄)
Author: HimBur | Category: Myanmar, လူတိုင်းအတွက်no comments | Tags: AIDS, ပညာပေး, ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်
AIDS ရောဂါပိုး စဝင်တဲ့ အချိန်နဲ့ AIDS ရောဂါ တကယ်ဖြစ်လာမယ့် အချိန်ဟာလည်း ရှည်ကြာတော့ သွေးပစ္စည်း သွင်းထားသူ တစ်ယောက်ဟာ AIDS ဖြစ်လာမယ်၊ မဖြစ်လာဘူးဆိုတာကို တိုတောင်းတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ မသိနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ပြဿနာဟာ လောလော ဆယ်မှာ ပြတ်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ပြဿနာဟာ လောလောဆယ်မှာ ပြတ် သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ AIDS ရောဂါပိုး (ဗိုင်းရပ်စ်) သွေးထဲမှာ ရှိ၊မရှိ ကိုတော့ စစ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
Two weeks to go before the scholarship deadline for the Melbourne IAC. Apply now. Jamie ++++++++++++++++++ The convening of the 20th International AIDS Conference (AIDS 2014) in Melbourne, Australia, in July 2014 representsatremendous opportunity to highlight the diverse nature of the Asia Pacific region’s HIV epidemic and the unique responses to it. The […]
AIDS နှင့် ကမ္ဘာ (၃)
Author: HimBur | Category: Myanmar, လူတိုင်းအတွက်no comments | Tags: AIDS, STD, ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်
AIDS ရောဂါ လက္ခဏာတွေက AIDS ပိုးဝင်ပြီး နှစ်အတော်ရမှ ပေါ်လာတတ်တာဆိုတော့ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်လောက်မှ “သွေးသွင်း AIDS” တွေ များများစားစား တွေ့ရတော့တာပေါ့။ အမေရိကန်မှာ သွေးသွင်းလို့ AIDS ရတဲ့ လူနာတွေ အနက် ၁၀၀ မြောက် လူနာကတော့ တင်ပါးဆုံရိုး အတုထည့်ခြင်း ခံရတဲ့ အသက် ၇၁ နှစ်ရှိ အမျိုးသမီးကြီး ဖြစ်တယ်။
ဒီလို ငြင်းလိုက်ရင် ပြဿနာဟာ ခေတ္တခဏလောက် ဖြစ်ဖြစ် ပျောက်နေမှာပဲလို့ ထင်နေကြတယ်။ ဒီလို “တို့ဆီမှာတော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ ယူဆနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ AIDS ကတော့ အရပ်ရပ် အနယ်နယ်ကို ပြန့်စပြုနေ ပါပြီ။ AIDS ကို ကနဦး ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၁ ခုနှစ် အရင် ၂ နှစ်လောက်မှာ တမူထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာ ရှိတဲ့ လူနာအချို့ နယူးယောက်နဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ တွေမှာ တွေ့ခဲ့ကြတယ်။